लकडाउनले ल्यायो खुशीको खबर, राजेश हमाल बन्ने भए बाबु ! - Filmy News Portal Of Nepal
कोरोनाले विश्व हल्लाईरहेको बेला सबै जनता आजित छन् । अझ त्यसइ माथिको लकडाउनले त झनै जनजीवन प्रभाबित भईरहेको छ । यसको प्रभाब हरेक क्षेत्रमा परेको छ । अझ त्यसइ माथि फिल्मिनगरी अछुतो हुने त कुरै भएन । कोही नायक नायिका घरमा साबुन पानीले हात धोएर बसेका छन् कोही समाजअसेवामा सकृय छन् त कोही अव घर व्यबहार र छोरा छोरीमा ध्यान दिन थालेका छन् ।
घरअंै बसेर सामाजिक संजालमा रम्ने नायक नायिका के गरिरहेकाछन् ? त्य फ्यानहरुले नियालिरहेको बेला महानआयक राजेश हमा पनि सामाजिक संजालबाट पर रहेनन । उनले अनेक फोटो बेला एलामा मसलाका रुपमा शेयर गरिरहेका छन् ।
पहिले राजेश हमालले कहिले बिहे गर्छन भन्ने प्रश्न सकिन साथ अव उनको सन्तान चासोको प्रश्न निक्कै तेर्सिन थालएको नौलो कुरो भने हैन । पहिले छोरा हुने की छोरी हुने भन्ने प्रश्न तथा जिज्ञासा दर्शक, शुभचिन्तकहरुले गर्दै आएका छन् | एउटा अनलाईनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा राजेश हमालले यो लकडाउनको समयलाई राम्रो खानेकुराहरु खाने र व्यायाममा समय बिताईरहेको बताएका थिए । सँगै उनले यो पटक सन्तान पाउने कुरामा चासो बढेको विचार पनि व्यक्त गरेका छन् ।
राजेशको पछील्लो समयका कुराले उनी अव बाबु बन्ने सोचमा तयार भएको बुझिन्छ । उमेरले भन्ने हो भने उनी हजुर बुवा नै बन्ने बेला भएको थियो । जे होस् राजेश हमाल बाबु बन्न लागेको भन्ने अपुष्ट शाही उनको फ्यानलाई निक्कै खुशीको खबर बन्न सक्छ ।